asalsashan » डा. प्रकाश शरण महत शनिबार नेपालगन्ज आउँदै डा. प्रकाश शरण महत शनिबार नेपालगन्ज आउँदै – asalsashan
डा. प्रकाश शरण महत शनिबार नेपालगन्ज आउँदै
नेपालगन्ज–नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री एवम् कोभिड–१९ अनुगमन समितिका केन्द्रीय संयोजक डा. प्रकाश शरण महत नेपालगन्ज आउने भएका छन् । भेरी अस्पतालमा शनिबार हुन लागेको प्लाज्मा दान कार्यक्रममा डा. महत आउन लागेका हुन् । नेपाली कांग्रेसले जिल्लास्तरमा देशभर कोभिड–१९ अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिले गर्न लागेको कार्यक्रममा पुर्व परराष्ट्र एवम् अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. महत प्रमुख अतिथिका रुपमा आउन लागेको बाँके अनुगमन समिति संयोजक लक्ष्मीनारायण शाहले बताए ।
बाँकेको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले शनिबार भेरी अस्पतालमा प्लाज्मा दान कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस बाँके कोभिड–१९ अनुगमन समिति संयोजक लक्ष्मीनारायण शाहले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्लाज्माको अत्याधिक माग भएपनि अभाव भएकोले कार्यक्रम गर्न लागेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीले कोरोना भाइरसको व्यवस्थापनको अनुगमन गर्नका लागि समिति बनाएको हो । तर हामी अनुगमनसँगै कोरोना रोगले पारेको प्रभाव र असरलाई कम गर्नपनि सहयोग गरिरहेका छौं । अरुको ज्यान बचाउनका लागि प्लाज्मा दान गर्नु पर्छ भन्ने पनि सन्देश दिन खोजेको छौं ।’ संक्रमितको उपचारमा प्लाज्माले धेरैलाई फाइदा भएपनि प्लाज्मा दान गर्नेको संख्या कम भएको शाहले बताए ।
प्लाज्मा दान गर्दा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दैन भन्ने सन्देश दिनको लागी पनि शनिबार प्लाज्मा दान कार्यक्रम गर्न लागेको नेपाली कांग्रेसका नेता शाहले बताए । शुक्रबार समितिले भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा प्लाज्मा दान गर्ने व्यक्तिको निशुल्क रुपमा पिसिआर र ‘एन्टी बडी’ परीक्षण गर्दैछ । शुक्रबार गरिने परीक्षणको रिर्पोट अनुसार प्लाज्मा दान गर्नेको संख्या निश्चित हुने शाहले बताए ।
कमिटको चौधौं साधारणसभा सम्पन्न
आयकर ऐन संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन टीआईको माग
योजना आयोगका सदस्य शाहीको राजिनामा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १० विधामा ५७ जनालाई बिभुषित गर्दै
संविधान दिवसको अवसरमा गाउँपालिका परिसर सरसफाई